Ogaden News Agency (ONA) – Halganka Ogadenya – Shalay iyo Maanta : Axmad Yaasiin 1992 – Qahira
Halganka Ogadenya – Shalay iyo Maanta : Axmad Yaasiin 1992 – Qahira
Posted by ONA Admin	/ January 25, 2015
Waxaa kusoo dhacay xafiiska Wakaaladda ONA maqaal tariikhi ah oo uu qoray bishii March 1992 mudane Axmad Yaasiin Sh. Ibraahim oo waqtigaa arday ka ahaa magaalada Qahira ee dalka Masar. Maqaalkan wuxuu taariikhi ku yahay marxaladaa oo ahayd marxalad ay gashay Itobiya xilli kala-guur ah (Transitional Period), taasoo ay dad badan ugu muuqatay waagaa inay Itobiya gashay taariikh cusub oo soo afjari doonta damicii Isticmaariga ahaa ee Boqorkii Abyssinia Minilik uu bilaabay markuu bilaabay dagaaladii ku dhisnaa dhul fidisiga iyo adoonsiga shucuubta ay ka midka ahaayeen Somalida Ogasdenya.
Maqaalkan oo aad u dheer kuna qoran afka carabiga oon filayo inuu mudane Axmad Yaasiin ugu talagalay inuu gaadhsiiyo haya’dahaha Masarida ee daneeya arimaha Geeska Afrika, gaar ahaan Somalida iyo Itobiya, ayuu wuxuu si aad ah ugu dheeraaday inuu xuso habkay Itobiya ku qabsatay Ogadenya iyo dawladihii reer Yurub ee gacanta ku siiyay arintaa isagoo ku soo qaatay (Hoos ka akhriso) qaar ka mid ah waxyaabihii laga qoray Ogadenya iyo Itobiya qarnigii 19aad. Wuxuu ka sheekeeyay in hab-dhaqanka Itobiya uu ku dhisnaa waligiiba in shacabka ay laayaan oo xoolahoodana dhacaan. Waxaa arimahaa si aad ah wax uga qoray buu yidhi mudane Axmad Yaasiin wariyayaashii uga soo waramayay dalalkooda waxa ka socda Itobiya iyo Ogadenya. Waxaa ka mid ahaa qoraagan uusoo xigtay A. Yaasiin ninka lagu magacaabo Mr. Stasi oo sheegay in Mokonan oo noqday xaakimka Harar uu Somalidii daganayd bariga Harer ku qaaday dagaal uuna kasoo qafaashay haween iyo caruur badan soona dhacay xoolo badan, hasa ahaatee buu yidhi Stasi waxaa dhexda u galay markay soo noqonayeen ciidan Somali ah oo ka furty qoryahay wateen iyo hub fara badan ..
Waxyaabaha uu sida aadka uga hadlay mudane A. Yaasiin waxaa ka mid ah, in shacabka Somaliyeed ee Ogadenya dagaal diineed lagu soo qaaday oo Itobiya marwalba ay la kaashanaysay xoogagii reer Yurub inay ku caawiyaan dhul balaadhsigeeda, iyadoo leh waxaan nahay jasiirad ku dhex jirta badweyn muslimiin ah
Taariikhda uu xusay mudane Yaasiin waxaa ka mid ah, in Itobiya oo kali ah dawladaha Afrika loo fasaxay inay hub soo dajistaan, iyadoo dawladihii Yurub ee gumaysinayay Afrika ay ka mamnuuceen dadkii Afrika inay hub soo gataan ama qaataan, si aanay ugu laynin mustacmiriinta Yurub.
Arintaasi waxay muujinaysaa inay Itobiya ka mid ahayd dawladihii gumaysiga Afrika ka qayb qaatay oo loo hubeeyay. Waxay kaloo muujinaysaa ilaa maantadan aan joogno inay Itobiya ka mid tahay dawladaha gumaysta dad Afrikaan ah, isla marahaantaana lagu ogyahay.
Taariikdaa ayuu aad uga sheekaynayaa mudane A. Yaasiin, waxaase muhiim ah markuu ka hadlayay siduu ku asaasmay ururka ONLF iyo baahida keentay.
Arintaa iyo markay xukunka qabsadeen kooxdan TPLF iyo siyaabihii ay dadweynaha iyo xisbiyadii gobanimadoonka ahaa ay u khaldeen iyo dareenka qoraaga maqaalka siduu ahaa 1992gii, ayaan Q2aad ee qormadeena aan kusoo qaadan doonaa.
Kifah Ogaden (Arabic)